स्यानिटाइजर हेरेर मात्र लिनुहोस्, यस्तो स्यानिटाइजर छ भने ज्यान जोखिममा पर्ला ? « Pen Nepal
स्यानिटाइजर हेरेर मात्र लिनुहोस्, यस्तो स्यानिटाइजर छ भने ज्यान जोखिममा पर्ला ?
Published On : 14 September, 2020 8:10 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन (मेथानल मिश्रित) रहेछ भने के होला रु त्यसमाथि बच्चाको हातमा प¥यो भने रु यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरका कारण कतिपयको छालामा एलर्जी देखिएको छ। डा। काफ्लेका अनुसार अमेरिकामा पनि मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। ‘मेथानल पेटमा पुगेपछि बान्ता हुन्छ। रक्सी बनाउँदा पनि मेथानलको प्रयोग हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘रक्सी खाएर कसैको ज्यान जान्छ भने त्यसको कारक मेथानल हो।’ अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ।